नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अमेरिकामा जीवन विमा ठगी प्रकरण : हजारौं नेपाली र भुटानी शरणार्थी समूदाय मार्कामा !
अमेरिकामा जीवन विमा ठगी प्रकरण : हजारौं नेपाली र भुटानी शरणार्थी समूदाय मार्कामा !
- दिनेश कार्की, बोष्टन , अमेरिका
मल्टिलेवल मार्केटिङमा आधारित बिमा कम्पनीहरुबाट जीवन विमा गर्ने अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले ठगिएको महसुस गर्न थालेका छन्। नेपाली बिमा अभिकर्ताले बिमित व्यक्तिलाई सम्पूर्ण जानकारी नदिइ गलत जानकारीमात्र दिंदा यस्तो स्थिति आएको हो।
बिमा अभिकर्ता (एजेन्ट)हरुले आश्चर्यजनक ढंगबाट कमिशन प्राप्त गरिरहने तर बिमा गर्ने व्यक्तिले आश्वासन दिइएको बचत व्याजदर नपाउँदा अमेरिका स्थित हजारौं नेपाली र भुटानी शरणार्थी समूदाय अहिले मार्कामा परेको मेरिल्याण्ड स्थित इण्डियन हेड शहरका उपमेयर किरण सिटौलाको भनाइ छ।
नेपाली समूदायबाट लोकतान्त्रिक तबरबाट चुनिएका प्रथम उपमेयर सिटौलाका अनुसार अंग्रेजी भाषा राम्रोसँग नबुझ्ने नेपाली र भुटानी समूदायका व्यक्तिहरुलाई समेत कुनै दोभासेको व्यबस्था नगरिकन बिमा बेच्नु भनेको सरासर अपराध हो । ‘राम्रो सँग नबुझिकन बुझें भनेर हस्ताक्षर गर्नु पनि बिमित व्यक्तिको गल्ती हो’, सिटौलाले भने ।
आफन्त र साथीभाइलाइ हदैसम्मको विश्वास गर्ने र भर पर्ने बानी नेपालीहरुको छ । नेपालीहरुको यो सोझोपनलाई उनीहरुका चलाख बिमा अधिकर्ताले फाइदाको रुपमा लिने गरेका छन् ।
सिटौला थप्छन्, ‘अहिले भएको ठ्याक्कै त्यस्तै हो, असम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले जव बिमा बेच्न थाल्दछन् वा बिमा भिडाउनका लागि तपाईं र तपाईंका परिवारका कलिला बालबालीकाको भविष्यको बारेमा अस्वाभाविक चिन्ता
व्यक्त गर्दछन् भने ठान्नुहोस् त्यहा पक्कै केही गडबडी छ।’ सिटौलाले सुझाए ।
इन्डेक्स्ड युनिभर्सल लाइफ अन्तरगत पर्ने बिमा उत्पादनहरु ठगीमा परेको भनिएका अधिकांश नेपालीले किनेका छन् । बिमा अभिकर्तालाई मात्र धेरै नाफा हुने यस किसिमको बिमा अधिकांश शिक्षित अमेरिकनमाझ त्यति चल्तीमा छैन । यसमा ग्राहकलाई निश्चित रकम वा इक्विटी इन्डेक्सड एकाउन्टको छनौट दिए पनि बजारमूल्य र सञ्चालन खर्च आदिका कारण बिमा गर्ने व्यक्तिले खासै फाइदा नपाउने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
जीवन बिमा गरि परिवारका सात सदस्यको मासिक १ हजार १ सय डलर तिर्दैआएका भर्जिनिया बस्ने रामप्रसाद खनाल त्यतिवेला छाँगोबाट खसेजस्तै भए जतिवेला उनलेथाहा पाए कि विमा गरेको चार बर्षमा उनको बचत शून्य बराबर रहेछ । उनको विमा गरिदिने नेपाली बिमा अभिकर्ताले उक्त बिमा कम्पनीबाट १५ प्रतिशत व्याज प्राप्त गर्न सकिने आश्वासन दिएको खनाल बताउछन् । ‘पैसा बैंकमा बचत गर्दा राम्रो व्याजदर प्राप्त नहुने स्थितिमा जिवन बिमा पनि हुने र बचत गरेवापत राम्रो व्याज पनि प्राप्त हुने यो प्याकेज आकर्षक लाग्यो ।’
विश्वास गरेका एक नेपालीले आफ्नो विमा कम्पनीमा आवद्ध गर्नकालागि नभएका स्किमहरु देखाए र उनले पनि साथी र विश्वासको आधारमा मौखिक कुरालाई पत्याए । उक्त विमाका विभिन्न शर्त तथा जानकारीहरु आफैंले पढ्न जरुरी ठानेनन् । ‘एजेन्टलाई धेरै विश्वास गर्नु र त्यसका शर्तहरु अक्षरश नपढ्नु मेरै गल्ती थियो।’ खनालले भने ।
उनले आफ्नो नाममा मात्र बिमा गरेनन् आफ्नै परिवारका भाइसहित ७ जना अनि आफ्नो वरपरका मानिसहरु गरी करिब ४० जनाको बिमा गराउन सहयोग गरे । ति नेपाली एजेन्टले ग्राहक खोजिदिएवापत कमिशन लिन आग्रह गरेको तर आफूले नलिएको खनाल दावी गर्छन। ‘हामीलाई विमा बेचिसकेपछि ति नेपाली हामीबाट टाढाटाढा हुने र हाम्रो सम्पर्कमैं आउन छाडे ।’ खनालले अगाडी भने ‘त्यसपछि विमाको बारेमा यसका जानकारहरुसँज बुझ्न थालें ।’ आफ्नो परिवार पूर्णरुपमा ठगिएको कुरा खनालले ४ वर्षसम्म विमा प्रिमियम मात्रै ५० हजार डलर तिरेपछि मात्र थाहा पाएको बताए ।
चिनजानका मानिसको चिप्ला कुराहरुको चंगूलमा पर्नेहरुको लिष्ट लामो छ । राजधानी डिसी वरपरको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ नेजाका सस्थापक अध्यक्ष गिरिश पोखरेलको परिवारले पनि यस्तै बिमामा ३० हजार अमेरिकी डलर गुमाएको बताए। ‘त्यो बेला बुझिएन। अहिले खोलो फर्किदैन।’
पारिवारिक मित्रको रुपमा रहेका एक व्यक्तिले छोरीहरुको भविष्यको लागि भन्दै इमोशनल व्ल्याकमेलिंग गरेपछि विमा गर्न उनी राजी भए । ‘कुनैबेला एउटै घरमा बसेको मानिसबाट यसरी ठगिनसकिन्छ भन्नेकुराको अनुमान गर्न सकिन, पोखरेलले भने ।’
अहिले अमेरिकामा रहेका नेपाली र भूटानी शरणार्थीसमूदायबीच विमा कम्पनीका नेपाली एजेन्टले विमा पोलिसीका बारेमा झुट्टा कुरा बताएर विमा गर्न लगाएको विषयले सामाजिक सन्जालहरुमा हाल विशेष चर्चा पाइरहेको छ । -साभार ; सेतोपाटी
अमेरिकी नेपाली समाजमा इन्स्योरेन्स स्क्याण्डल - शिव प्रकाश
"सोझा साझा नेपाली र नेपाली मुलका भुटानी हरुलाई चुर्लुम्म डुबाएर एजेन्ट हरु हप्तामा म यती कमाउँछु र उती कमाउंछु भन्दै पे चेक का कुरा फेसबुकमा शेयर गरिरहँदा ठगिएका ग्राहकहरुको रुवाबाशी छ । यस्तो बेला पनि कलम चलाईँदैन भने हामी के का पत्रकार ?? के को समाजसेबी ?? केको अाँखा देख्ने मान्छे ?? सबैले सोँचौ, गलत कुरालाई निरुत्साहित र सहि कुरालाई प्रोत्साहन दिउँ । हामी चाहन्छौँ हाम्रा अरु थुप्रै नेपाली हरु पनि उपेन्द्र महतो, जिबा लामिछाने, शेस घले बन्न सकुन तर अशल काम गरेर ।" - नेपाल मदर डट कम www.Nepalmother.com
मित्रहरु, मित्रतामा जति ठूलो शक्ति केहीमा हुँदैन भन्ने विश्वास हामीलाई भायो तर त्यसले घातको घनत्व त्योभन्दा बढी बोकेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई कहिल्यै विश्वास भएन। इन्स्योरेन्समा पनि हामीलाई मित्रताले नै तान्यो ।
* अमेरिकामा रहेका व्यक्ति विशेष र समाजलार्इ सुसूचित गर्नु र थप क्षति हुनबाट बचाउने प्रयासलार्इ हामीले हाम्रो कर्तव्य ठान्यौं । अर्थात म एउटा लेखक हुनु र मेरा केही भाइमित्र पत्रकार हुनुको दायित्व र कर्तव्यले हामीलाई घचघच्यायो ।
* यो एपेटाइजर मात्र हो, मेन कोर्श आउन बाँकी छ । मेन कोर्षमा, जीवन वीमामा हामी कसरी ठगिएका छौं ? हाम्रो दुःखको कमाइ केही वर्षपछि कसरी वालुवामा पानी हुन्छ ? के के कुराहरू लुकाइएका हुन्छन् ? के के देखाइएका हुन्छन् ? हाम्रा थप त्रुटीहरू के के भए ? मेडिकल बिना कतिसम्मको इन्स्योरेन्स हुन्छ ? कुनै अर्को कम्पनीको इन्स्योरेन्स ट्रान्सफर हुन्छ कि हुदैन ?
* आगामी दश वर्षमा नेपाली समुदायले कति विलियन डलर गुमाउन सक्छ ?
* त्यो पैसा कहाँ जान्छ ?
* एउटा एजेन्टले हप्ताको 28 हजार डलर कमाए भनेर फेसबुकमा गर्वका साथ किन शेयर गर्छ ?
खोज पत्रकारितामा दखल राख्ने केही पत्रकार भाइमित्रको सहयोग र संलग्नतामा हामीले केही डकुमेन्ट प्राप्त गरिसकेका छौं । पीडितहरूबाट पनि त्यस्ता डकुमेन्टहरू प्राप्त भएका छन् तिनको विश्लेषण सहित हामी फेरि केही दिनभित्रै लेख्ने छौं ।
* मित्रहरू, इन्स्योरेन्सबाट फाइदा नहुने हैन, धेरै हुन्छ तर किन्नेलाई हैन, बेच्नेलाई।
- शिव प्रकाशको सनसनी पूर्ण लेख प्रमाण सहित ।
'These Products are designed to be sold, not bought!'
अर्थात ती बस्तुहरु बेच्नका लागि बनाइका हुन्छन्, किन्नका लागि हैन । बेच्नका लागि बनाएका ती कयौ वस्तुमध्ये केही जीवन बीमा पर्दा रहेछन् । बेच्नका लागि बनाएको त्यो बस्तु मैले पनि किने । तर दोष बेच्नको हैन, मेरै हो । किन्ने म हुँ बेच्नेको काम आफ्नो माल जसरी भएपनि बेच्ने हो । किन्ने काम त्यो मालको गुण–दोष ठम्याएर मात्र किन्ने हो । त्यो गरिन, नगर्नु मेरै गल्ती हो । आफ्नो गल्तीप्रति आफैंलाई धिक्कार ! प्रसंग हो, अमेरिकाको नेपाली
समुदायमा फैलिएको इन्स्योरेन्स स्क्याण्डलको ! यो स्क्याण्डल कति डरलाग्दो छ ? समयले बताउने छ, सत्यहरु क्रमशः उद्घाटित हुदै छन् । तर अहिले नै नेपाली समाजमा छताछुल्ल भएको छ । म जस्ता कति लगनी कर्ताले मभन्दा न्याउरो मुख लगाएका छन् । मैले ११ वर्ष अघि जीवन बीमा किनेको रहेछु । अहिले फायक पल्टाएर हेर्दै छु, कति गुमाए ? अझै भेउ पाउन सकेको छैन । त्यहाँ प्रयोग गरिएका भाषा र इण्डेक्समा देखाइएका अंकहरुको अर्थ र हिसाब नबुझ्नु अहिले पनि मेरो प्रमुख कमजोरी भएको छ । तर अहिलेसम्म जति बुझाएँ त्यो रकम निक्कै फराकिलो दायरामा घटेको छ । घट्ने कारणहरु धेरै रहेछन् ती कुराको जानकारी वीमा खरिद गर्ने बेलामा भएन । बढ्ने कारणहरु थोरै भएपनि धेरै दिइयो मन लोभियो, महिनाको तीनसय डलरका दरले तिरेँ । वीमा लिनुभन्दा अगाडि मलाई बीमा आवश्यक छ कि छैन ? न मैले साचेँ, न मैले सोधेँ । बीमा चाहिन्छ तर कुन साइजको, कति रकमको, कति प्रिमियको ? कस्तो ? केही सोधिन । बेच्नेले जे भन्छ त्यो सुने, वीमा लिएँ । बेच्नेले सबै राम्रै र सधैं राम्रो हुने बतायो । आफ्नो लगानीमा वार्षिक १३ प्रतिशतसम्म मुनाफा हुने देखायो । जीवन बीमा चाहिन्छ । त्यसमाथि सबै राम्रै राम्रो, नराम्रो भन्ने केही नभएपछि नलिने भन्ने प्रश्न पनि भएन । अझ त्यसमाथि राम्रोसँग चिनेजानेको मान्छे । १० वर्षपछि तेरो क्यासभ्यालु यति हुन्छ भनेर लोभलाग्दो फिगर देखायो । मानौ, ४० वर्षपछि मृत्यु भएमा परिवारले यति रकम एकमुष्ट पाउँछ भन्ने अर्को झन् लोभलाग्दो रकमले लोभ्यायो । उसले जे जे भन्यो, विश्वास गरेँ, कुनै प्रश्न गरिन । प्रश्न किन गरिन ? बीमाका बारेमा मूल प्रश्न पनि त्यही रहेछ त त्यो नै गरिन । पहिलो कुरा, मैले उसलाई विश्वास गरेँ । किन गरेँ ? मित्रताका कारणले गरेँ । त्यसैले कुनै प्रश्न गरिन । सँस्थागत संलग्नताका कारणले धेरैपछिसम्म पनि गरिरहेँ । सामाजिक र समुदायीक साइनोका कारणले पनि गरिरहेँ । त्यसैले म उसालाई दोष दिन्न, दोषी मै हुँ । विश्वास गर्नु नै मेरो दोष हो । मूल कमजोरी पनि हो । उसको पेशा र
पेशागत कर्म उसले ग¥यो, वीमा बोच्यो । तर कर्म गर्नेले पेशागत धर्म कति निभाएको छ ? मैले कहिल्यै सोचिन । हेरिन, खोजिन । गल्ती मेरो भयो । मेरै जस्तो गल्ती धेरैले गर्नु भएको रहेछ भन्ने अहिले देखियो । हामीले प्रश्न नगर्नुको कारण अर्को पनि छ । इन्स्योरेन्सको त्यो २० औं पेजको बाइण्डिङ् बुकमा प्रयोग गरिएको भाषा । भाषा नबुझ्नु । बुझेर पनि नपढ्नु अर्को ठूलो कमजोरी हुन गयो । तर हाम्रो यो कमजोरीको कारण पनि मित्रता र मित्रतामाथिको विश्वास नै हो । मित्रहरु, मित्रतामा जति ठूलो शक्ति केहीमा हुदैन भन्ने विश्वास हामीलाई भायो तर त्यसले घातको घनत्व त्योभन्दा बढी बोकेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई कहिल्यै विश्वास भएन । मित्रले जे भन्यो त्यसैमा विश्वास ग¥यौं । जहाँजहाँ भन्यो त्यहाँत्यहाँ सही ठोक्यौं । दिउँसै देखाएको सपानामा रमायौं । २० वर्षपछि मेरो पैसा १० औं गुना बढेर यति र उति हुन्छ भनेर दंग प¥यौं । दोष उसको हैन, हाम्रै हो । सयप्रतिशत हाम्रो हो । बैंकमा पैसा राखे एक प्रतिशत पनि व्याज नआउने इन्स्योरेन्समा १३ प्रतिशतसम्म बढ्ने । मीठो चारोले तान्यो । हामी फस्यौं । अहिले अरुलाई दोष दिएर हुदैन । अमेरिकाका नेपाली समुदायलाई बेचिएका इन्स्योरेन्स मध्ये राम्रो इन्स्योरेन्समा गनिएको मेरो त यो हालत छ भने अहिले चर्चामा आएका र विगत २–३ वर्षमा हजारौं नेपालीलाई बेचिएका इन्स्योरेन्सको हालत के होला ? अहिले पनि धेरै नेपालीको समस्या मेरोभन्दा जटिल र डरलाग्दो हुन सक्छ । फेसबुकमा व्यक्त आक्रोशले यस्तै देखाएको छ । प्रायसबै आक्रोश मिल्दाजुल्दा पनि छन् । इन्स्योरेन्सबाट फाइदा नहुने हैन, धेरै हुन्छ तर किन्नेलाई हैन, बेच्नेलाई । बेच्नेलाई धेरै फाइदा हुन्छ भने किन्नेले धेरै घाटा बेहोर्नै पर्छ । सामान्य सिद्धान्त पनि हो यो । हामीमा यही सिद्धान्त लागू भएको हो । वैश्य युग हो तर व्यवसायमा ‘इथिक’ पनि हुन्छ भन्ने कुरा पुरै गौण हुन गयो भने वैश्यकर्म हुदैन, अधर्म हुन्छ । मुख्य कुरा, आफ्नै समुदायको कोही मान्छेले केही काम गर्छ र त्यो कामले उसको पनि उन्नती हुन्छ र आफूलाई पनि राम्रो हुन्छ भने कसले नाई भन्छ । समुदायको मान्छे माथि उठ्दा, उन्नति–प्रगति गर्दा कुन नेपालीलाई गर्व हुदैन । शेष घलेप्रति गर्व गर्ने हामी नेपाली कति छौं ? अमेरिकामा पनि यस्तै शेष घलेहरु जन्मिउन भन्ने चाहना राख्ने धेरै हुन सक्छन् । भएको यो पनि हो, विश्वासको मूख्य कारण पनि यही हो ।
एउटा नमूना जस्ताको तस्तै राख्न चाहन्छु– ‘आज म जे लेख्न लागेको छु, यो मेरो लेखाईले मेलै घमण्ड गर्न खोजेको लगायत तपाइँहरुले सोच्ने सम्भावना छ भन्नेमा सचेत हुदै विनम्रतापूर्वक भन्छु, त्यस्तो नसोचिदिनु होला । मेरो आजको साप्ताहिक Pay Check ko रकम २८, ००० (अट्ठाईस हजार डलर रहेछ) मैले अमेरिका बसाईको शुरुको १० वर्ष एकाउण्टेण्टको काम गर्दा यति ठूलो रकम वर्षभरिमा पनि कमाउन सकेको थिइन । आज यो सम्भव हुनुमा मैले Land of Opportunity को उपयोग गर्न पाएर हो ।’ एक व्यक्तिले फेब्रुअरी ११, बिहान १०ः५२ गर्वका साथ आफ्नो स्ट्याटश शेयर गरेका रहेछन् । त्यसलाई मेरा एक मित्रले फेब्रुअरी १७ मा रिशेयर गरे । त्यसैदिन मित्रसँग भेट भयो । मित्रले भने– ‘हाम्रो दुःखको कमाई कहाँ जाँदो रहेछ बल्ल थाह भो ।’ उनले तिनै गर्विला मान्छेसँग जीवन वीमा किनेका रहेछन् ।
यो लेख तयार गर्दा गर्दै भर्जिनिया, अमेरिका निवासी सम्झना आत्रेयको आक्रोस पनि फेसबुकमा उग्र भएर पोखियो । जो स्वयं भुक्तभोगी थिइन् । स्क्रिन प्रिन्टको कपी पनि राखिएको छ । एकतिर व्रम्हलूट र अर्कोतिर कथित समाजसेवी भएर रिकिम्म परेर हिडेको निर्लज्जतालाई पनि उनले औल्याएकी छिन् । विषयगत ज्ञान नभएको झूण्ड भनेकी छिन् । नेपाली सामाजिक सँस्थाहरुप्रति आम नेपालीको उदाशिन हुनु र दूरदूर गर्नुको कारण पनि सम्झनाजीले भनेजस्तो समाजसेवाको जामा नै हो । यो जामाभित्र के लुकेको छ हामीले खोजेनौ ।
त्यसमाथि हामीलाई लोभलालचले फसायो । धोती खुस्किएको अहिले थाह भो– वास्तवमै यो किन्नका लागि हैन, बेच्नका लागि मात्रै रहेछ । खासाको माल जस्तै हेर्दा साह्रै सुन्दर, साह्रै राम्रो तर प्रयोग नै नगरी राखेकै ठाउँमा बिग्रिने । फेसबुकमा एउटा कमेन्टका रुपमा पनि लेखेको थिए, यहाँ पनि उल्लेख गर्छु– मोन्छे देखेर हैन, भोगेर चिनिन्छ । बोलेर पनि हैन, बेहोरेर मात्र चिनिन्छ । चिन्न नसक्नु हाम्रै गल्ती हो । चामलका गेडा हेरेर कुहिएको कनिका किन्ने मूर्खता हामीले नै ग¥यौं । सम्झना आत्रेयजीले औंल्याए जस्तो के हामीले एजेन्टको योग्यता, अनुभव, विषयतग ज्ञानबारे सोध्यो, खोज्यौं ? सोधेनौ खोजेनौ । किन भने मित्रता, चिनजान, चिनजानवालाको सिफारिस र भएभरका सँस्थामा भएको संलग्नताका कारणले हामी विश्वास ग¥यौं र गरिरहेका छौं । मित्रहरु, गल्ती र दोष एजेन्टको हैन । आफ्नै हो ।
साभार : Setopati.com + थप सामग्री लेखक शिव प्रकाशबाटै थप गरी पठाइएको
रगत पसिनाको कमाई लुटेर सपना बेच्दै अमेरिकी सपना साकार पर्ने घरभित्रका ठग र लुटेराहरुलाई अमेरिकी कानुनको दयारामा ल्याउने काममा हामी सबै लागौं
संसारमा सबभन्दा बढी बिक्रि हुने चिज सपना रहेछ त्यो राजनीति देखि ब्यापारसम्म त्यहि रफ्तारमा बिक्रि हुन्छ | तर कुनै कुनै किनिएको अथवा स्वीकार गरिएको सपना यति महँगो हुन्छ कि त्यो जीवन पर्यन्त पिडा र घात भएर बल्झिरहन्छ | सपना अनि सम्भावनाको देश भनेर जानिने अमेरिकामा त्यो सपनाको आकार पनि ठुलै हुन्छ अनि त्यहि ठुलो आकारको सपना नै आखिरमा गएर चटके ठगहरुले चक्रब्यूह रच्ने फराकिलो धरातल बन्दछ |हामी अक्सर हाम्रै र आफ्नै मान्छेबाट ठगिएका, मिचिएका, थिचिएका र बेचिएका छौं चाहे त्यो मातृभूमी नेपालमा होस अथवा त्यहि रंगीन सपनाको कर्मभुमी अमेरिकामा | सगर्व श्रम बेचेर खान पाईने अमेरिकामा पनि हामी हाम्रै मान्छेलाई ठग्ने बहाना र अप्ठेरा ठाउंहरु खोज्छौं: जीवन बीमा (लाईफ ईन्स्योरेन्स), काम लगाई दिने (एम्प्लोईमेंट एजेन्सी), मान्छे ल्याउने (मेनपावर कम्पनी) अनि अरु के के के के | नचाहिएको ठाउंमा छुच्चो र कडा जस्ता लाग्ने हाम्रा मान्छेहरु चाहिएको बेलामा कि त लाछी अथवा अधिक क्षमाशिलता बनिदिन्छन | तिम्रा श्रीमान र छोरालाई अमेरिका ल्याईदिन्छु भनेर बीसौं हजार ठग्नेलाई अमेरिकी कानुन अनुसार कारवाही गरौँ भन्दा “होइन हौ बाबु छाडी दिउँ त्यो पापीलाई अब त्यसलाई अमेरिकी जेलमा कोचेर के गर्नु मेरो पैसा असुल हुने होइन | त्यसको पनि श्रीमती लालाबाला होलान तिनको बिजोक हुन्छ |” भन्छन अनि प्रवासी समाजमा त्यस्ता हुडारहरु अर्को शिकारको बहाना खोज्छ | यो मैले आफैले
भोगेको यथार्थ र घटना हो |
अहिले चर्चाको शिखरमा छ जीबन बीमा (लाईफ ईन्स्योरेन्स) को नाममा नेपाली एजेन्टहरुले गर्ने गरेको ठगी धन्दा | यो प्रोडक्ट आफैमा खराब होइन तर अधिकांश नेपाली एजेन्टहरुले यो उत्पादन बिक्रि गर्दा गलत सुचना, तथ्याङ्क र गणित दिएर ग्राहक (सेवाग्राही) लाई ईन्स्योरेन्स प्लान होइन कोरा सपना बेचेका हुँदा रैछन | त्यो सत्यको ढिलै भएपनि अहिले पर्दाफास हुँदैछ | अघिल्लो हप्ता संचारकर्मी राम प्रसाद खनालले यसै बिषयका ज्ञाता अनिल खनालसंग वार्तालाप गरेको श्रब्य-दृश्य सार्वजनिक सम्प्रेषण भएपछी यो बिषय प्रवासी नेपाली समाजमा भाईरल बनेको छ | प्रवासी नेपालीहरुको बाक्लो आवादी भएको सहरको घर-आँगन, चौक, गल्लि, मोहल्ला अनि डबलीहरुमा यहि बिषय र सम्भावित ठगहरुको बारेमा चर्चा-परिचर्चा सुरु भएको छ |
यसो गरिरहँदा अथवा भनिरहँदा गहुँ पिस्दा घुन चाही पिस्नु हुँदैन त्यो बिषयमा हामी संचारकर्मीहरु सचेत र संबेदनशील हुनुपर्दछ किनकी त्यो उनीहरुले स्वेच्छाले अङ्गीकार गरेको पेशा हो तर उत्पादन नबेचेर उनीहरुले पनि सिर्फ उडन्ते सपना मात्र बेचेका रहेछन भने अमेरिकी कानुन र कानुनले तोकेको दण्डबाट चाँही कुनै पनि बहानामा उनीहरुले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन | राम प्रसाद खनालले आरम्भ गरेको यो साहसिक अभियानले अहिले सपना बेचेर महल ठड्याउने सपना बोकेका ठगहरुको मनमा ८.५ रेक्टर स्केलको भुकम्प आएको छ | त्यसो परकम्पनले अहिले अरु खाले पेशेवर ठगहरुको पनि ओंठमुख सुक्न थालेको छ | यो चेतनामुलक अभियानले बृहद परिबेग ल्याएको छ | अहिले पछिल्लो चरणमा थुप्रै संचारकर्मीहरुले यथार्थपरक अनि खोजमुलक आलेख तथा समाचारहरु सम्प्रेषण गरिरहेका छन | पछिल्ला दिनहरुमा लेखक शिब प्रकाश, दिनेश कार्की, गुणराज लुइंटेल, चन्द्र खतिवडा, भोला आचार्य, सहदेब पौडेल, सम्झना आत्रेय, ससंग लामा जस्ता संचारकर्मीहरुले आफ्ना विचार र अनुभब सम्प्रेषण गरिरहेका छन |
यस खाले दण्डहिनता हामी आफ्नै कारणले मौलाईरहेको छ | हामी देख्छौं तर बोल्दैनौं, चुपचाप सहन्छौँ त्यसैको फाईदा उठाएर प्रवासमा पनि हाम्रो समाज परपीडक बनिरहेको छ | लुटको साम्राज्य बनिरहेको छ | तपाई हाम्रो रगत पसिनाको कमाई लुटेर सपना बेच्दै अमेरिकी सपना साकार पर्ने घरभित्रमा ठग र लुटेराहरुलाई अमेरिकी कानुनको दयारामा ल्याउने काममा हामी सबै लागौं |
न्युयोर्कको रेल स्टेशनको डिब्बा भित्र र बाहिर होर्डिंग बोर्डहरुमा एमटीएले लेख्ने गरेको छ “इफ यु सी समथिङ्ग, से समथिङ्ग” यत्ति गर्न सके हाम्रो प्रवासी नेपाली समाज एक कदम अगाडी बढ्छ |
- plz see this link too - http://sampreshan.org/?p=92499
﻿अमेरिकी नेपालीमा विमा आतंक !
शिव प्रकाश र दिनेश कार्की लेख्नुहुन्छ :
जीवन बिमा के हो ? किन ? केका लागि ? कुरै नबुझी हामी धेरैले किन्यौ । तर किन किन्यौ विश्वासका कारणले किन्यौं । नेपालीले नेपालीमाथि विश्वास गर्यौं । जीवन बिमा अहिले अमेरिकामा रहेका नेपाली र भुटानी नेपाली शरणार्थीका घरघर चर्चा र त्रासको विषय बनेको छ । यो आलेखमा मुख्यतः जीवन बिमामा हामी कहाँ र कसरी ठगिएका हुन सक्छौ भन्नेछ । यससँगै हामी यो विषयमा किन लेख्दैछौं भन्ने प्रश्न पनि अहम् भएको छ ।
हामी किन लेख्दै छौं ?
बजारको हल्ला पछाडि लागेका होइनौं । नेपालीले प्रायशः नेपालीलाई मात्र बेचेको इन्स्योरन्सका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा एक्कासी चर्चा परिचर्चा हुन थाले । असन्तुष्टी व्यापक देखियो । धेरैले आफू ठगिएको प्रमाण सहित प्रतिकृयाहरु राखे । धेरै प्रतिकृयाहरु विश्लेषण गर्यौं । असन्तुष्टको भाषाले कतैकतै सामाजिक शिष्ठताका सीमा पनि नाघेको देखियो । त्यसको अर्थ, त्यो उग्र असन्तुष्टीको अभिव्यक्ति हो भन्ने ठान्यौं । यति धेरै क्रिया–प्रतिक्रिया भएपछि यो व्यक्तिगत हैन समाजिक विषय हो भन्नेमा हामी पुग्यौं । निक्कै ठूलो नेपाली समुदाय यसमा गाँसिएको देखियो ।
म शिव प्रकाशले एउटा कमेन्ट लेखेँ । विषयले व्यापकता पाउँदै गयो । मलाई फोन र टेक्स म्यासेज आउन थाले । केही मित्रबाट फरक खाले अवधारणा आए । तपाइँ जस्तो मान्छेले यस्ता कुरामा हात हाल्ने हैन, लेख्ने हैन । बरु हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ, गर्छौ जस्ता अफर पनि आए । मलाई लाग्यो कतै लालचको चारो
त फालिएको हैन ?
यो बिकाउ युगमा आफ्नो मूल्य नतोकी बस्नु पनि साह्रै गाह्रो रहेछ ।
हामी फेरि प्रतिकृया केलाउन थाल्यौं र सोच्न थाल्यौं । यो बिमा व्यापार किन नेपाली–नेपालीबीच मात्र भयो ? किन नेपालीले नेपालीलाई मात्रै बेच्यो ? अरु कसैका गुनासा किन छैनन् ? बिक्रेता पनि नेपाली र क्रेता पनि नेपाली मात्र किन छन् ? प्रतिकृयाहरु पनि यस्तै देखिए ।
त्यतिबेलासम्म एउटा कुनै बिमा कम्पनीको नाउँबाट बिना हस्ताक्षरको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलिसकेको थियो । आशय थियो–यसको बारेमा बोल्ने–लेख्नेका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिनेछ ।
एक मित्रले राम्रो भाषामा मेरो प्रशंसा गर्दै त्यो धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति मेरो म्यासेन्जरमा पठाउनु भयो । हेरेर छक्क परेँ । फोनमा कुरा गरौं भनेर म्यासेज पठाएँ । मित्रले फोन गर्नु भयो । मैले भने–तपाइँहरुले अर्को गल्ति गर्दै हुनुहुन्छ । यति हतारमा यो भाषाशैलीको, बिना हस्ताक्षरको यस्तो उर्दी जारी गर्नु भनेको तपाइँहरुको कामलाई झन् शंकास्पद बनाउनु हो भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ ।
मित्रले काम कस्तो गर्नु भएको छ थाह छैन । तर, कुरा ज्यादै ‘प्रोफेशनल म्यानर’मा गर्नु भयो । एउटा व्यावसायीक मान्छेमा हुनु पर्ने गुण गफमा देखाउनु भयो । जसको म प्रशंसा पनि गर्छु । उहाँलाई सुझाव दिदैं भने–तपाइँहरुले गलत इन्स्योरेन्स बेच्नु भएको छैन भने पब्लिक्ली सामना गर्नुस् । धेरै मान्छेले आफूलाई झुक्याइएको, ढाँटिएको, इन्स्योरेन्स सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी नदिएको, ठगिएको कुरा लेख्नु भएको छ ।
उहाँहरु सँग कुरा गर्नुस् । उहाँहरुको चित्त बुझाउनुस् । कुनै ऐजेन्टले जानेर–नजानेर गल्ती गरेको छ भने कहाँ गल्ती गर्यो, के के गर्यो, हल्लामात्र हो कि साच्चै हो, त्यसको खोजी गर्नुस् । गल्ती गर्ने एजेन्टलाई कारबाही गर्नुस् । सच्याउनुस्, आफ्नो र सँस्थाको इमेज बचाउनुस् । हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।
मित्रले धम्क्याउन उद्धेश्यले हैन भन्दै विनम्रतापूर्वक सौहार्द्रता देखाउनु भयो । मलाई लाग्यो, एजेन्टहरु सबै खराब छैनन् ।
अर्का एक मित्रसँग कुरा भयो । बिना मेडिकल रिपोर्ट लाखौंको जीवन बिमा गर्न सकिन्छ भनेर सोधेँ । उहाँले सकिदैन भन्नु भयो । तर, आफू स्वयं भने यो व्यवसायमा नभए पनि पारिवारिक संलग्नता रहेको कुरा बताउनु भयो । ती मित्रले पनि मलाई यो विवादबाट टाढा रहन सुझाव दिनु भयो । उहाँले पनि राम्रै मान्छेले गर्ने ढंगले कुरा गर्नु भयो ।
भोलिपल्ट बिहानै फेसबुकमा उही उर्दी आएको छ । तर, फरक मान्छेबाट । मैले उहाँलाई प्रश्न गरेर टेक्स्ट म्यासेज लेखेँ । तपाइँले यो उर्दी मलाई किन पठाउनु भएको ? तपाइँ चाहनु हुन्छ भने कुरा गरौं । मेरो फोन नम्बर मैले पठाएँ । तर, उत्तर आएन ।
हामीलाई लाग्यो यो लरतरो विषय हैन । पिरामिड र नेटवर्किङ् बिजनेश खतरनाक हुन्छ भन्ने पनि सुनेको हो । जति सक्यो गहिराइमा पुग्नु पर्छ भन्ने लाग्यो । इस्योरेन्सका नाउँमा तीन–चार वर्षमै तीसौं–चालीसौं हजार डलर गुमाएका प्रमाणहरु सामाजिक सञ्जालमा फैलिन थाले ।
हामी अनुमान लगाउन थाल्यौं, अमेरिकाम तीन लाख नेपाली छन् भनिए पनि अपुष्ट अनुमानमा सात लाखभन्दा बढी छन् भनिन्छ । यही ‘स्पिड’मा यी मध्येका तीन लाख नेपालीले मात्र चार–पाँच वर्षमा बीस–तीस हजार डरलका दरले गुमाए भने पाँच–सात बिलियन डलर गुम्न सक्छ । पाँच–सात बिलियन भनेको त पाँच–सात खर्ब रुपैयाँ हो । यो भनेको नेपाली समूदायको ठूलो क्षति हो । यति पैसाले डाँडाकाँडा झिलिमिली पारेर नेपाल बनाउन सकिन्छ ।
हामीले सोच्यांै, लेख्ने कि नलेख्ने ? नलेख्ने भए किन नलेख्ने ? लालचमा परेर नलेख्ने ? त्रासका कारणले नलेख्ने ? लेख्ने भए केका लागि लेख्ने ? सधैं आफ्ना कुरा मात्र लेखेर जान्ने सुन्ने मात्र हुने कि समाजका लागि पनि केही लेख्ने ? लेखन भनेको के हो ? कसैलाई टल्काउने र सधैं खादा–माला भिरेर ‘फेसबुकको लाइक क्लव’ (लाइकको साटो लाइक गर्ने झुण्ड)मा रमाउनेहरुको रुद्रगाथा मात्र गाउने, लेख्ने ?
मान्छे समाजका लागि मर्न तयार हुन्छ भने हामी सत्य र फेला परेका तथ्यका बारेमा लेख्न किन तयार नहुने ? हामीले थोरबहुत भए पनि कलम चलाउन जानेको र पत्रकारिता गरेको केको लागि भन्ने सौच्यौं । समाजको हितका लागि लेख्ने निधो गयौंं ।
तर, अदालतमा लाने धम्कीहरु सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेका थिए । अझैं फैलिरहेका छन् । खोज पत्रकारितामा जानकार भाइहरु सहभागी हुनु भयो । यो ‘फ्रिडम अफ् स्पिच’ भएको देश हो । हामी धम्कीको सामना गर्न तयार भयौं ।
यसैबीच, मैलें (शिव प्रकाश) एक जोडीलाई भेटेँ । इन्स्योरेन्सका बारेमा कुरा हुँदै जाँदा मैले भने, मलाई पनि धेरै थाह छैन तर इण्डेक्स युनिभर्सल लाइफका कमजोरीका बारेमा भने केही बताउन सक्छु । मैले उहाँहरुलाई केही नमुना देखाएँ । दुबै छागाँबाट खसेजस्तो हुनु भयो ।
उहाँहरुलाई सोधेँ, एजेन्टलाई सोध्नु भएन ? उहाँहरुको जवाफ थियो–पाँचवर्ष पछि पैसा बढ्छ रे । मैले भने, यदि इन्डेक्स युनिभर्सल लाइफ इन्स्योरेन्स हो भने पाँच वर्षपछि तपाइँको पैसा बढ्ने हैन, यसरी बालुवामा पानी हुन सक्छ भनेर एउटा नमुना देखाएँ । इन्स्योरेन्स सम्बन्धी ज्ञान भएको मान्छेलाई वाइण्डिङ कपी देखाउनुस्, सबै छर्लङ्ग हुन्छ भन्ने सुझाव पनि दिएँ ।
न्याउँरो मुख लगाउनु भयो । जसले अरु कुनै कम्पनीबाट झण्डै साढे दुई वर्ष अघि इन्स्योरेन्स लिइसक्नु भएको रहेछ । करीब साढे चार हजार डलर तिरिसक्नु भएको रहेछ । त्यो पनि ल्याप्स भएछ ।
मनमनै लाग्यो, के मान्छेले यतिसम्म बेइमानी गर्न सक्छ ? हुन त मान्छे जस्तो बेइमान् प्राणी यो संसारमा अर्को छैन ।
दुःखको कमाई गुम्दाको अनुहार र सुन्दाको त्यो कथा कारुणिक थियो । धेरैले फोन गर्न थाल्नु भयो । धेरैका कथा र आक्रोस सुनिए । त्यसमध्ये एक मित्रले मलिन स्वरमा भन्नु भयो, सर म त बर्वाद भएँ, मेरो पुरै परिवारको छ । घरमा बस्न नसक्ने भएँ ।
हामीलाई कर्तव्य र दायित्वबोधले झन् थिच्यो । हामीले समूह बनायौं । इन्स्योरेन्स सम्बन्धि जानकार व्यक्तिबाट एउटै विषयमा तीन–चार जनाको मत लियौं । इन्स्योरेन्समा उल्लेख भएका तथ्याङ्का बारेमा पनि सबैलाई सोध्यौं । सबैको जवाफ उस्तै आयो । उहाँहरुले हामीलाई बुझाएका कुरा लेख्ने निधो गर्यौं । लेखनको प्रतिनिधित्व शिव प्रकाश र दिनेश कार्कीले गर्यौं । सोसियल इस्यूमा लेख्नु हामी लेखक/पत्रकारको कर्तव्य हो भन्ठान्यौं ।
यी कुरा लेख्दा अदालतमा जानु पर्छ र वयान दिनु पर्छ भने हामी तयार छौं । अदालतमै गएर उपभोक्ता अधिकार अर्थात ‘कन्जुमर राइट्’का बारेमा कुरा गर्न तयार छौं । त्यो दिन र समयको प्रतिक्षामा पनि हुन्छौं ।
जीवन बिमा बेच्दा ग्राहकलाई आफूले बेचेको बिमा सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी दिएको छ, छैन ? त्यसको राम्रो–नराम्रो पक्षका बारेमा ग्राहकले बुझ्ने सरल भाषामा बुझाएको छ, छैन ? उसले बुझेर लियो कि नबुझी लियो ? भएका बिमा के भनेर क्यान्सिल गराइयो ? त्यसबाट हुन गएको क्षति कसले भर्ने ? इत्यादिका बारेमा पनि जवाफ दिन हामी तयार छौं ।
जीवन बिमाका बारेमा जान्नु पर्ने समान्य कुराः
सकेसम्म सामान्य र सबैले बुझ्ने भाषामा राख्ने प्रयत्न गरिएको छ । पूर्णतः भन्ने कुरा धेरै कुरामा नहुन सक्छ, यहाँ लेखिएका कुरालाई मात्र पूर्ण नमान्नु होला । आफैंले थप सोधीखोजी गरेर थप जानकारी पनि लिनु होला ।
१) आफूले तिरेको प्रिमियम ट्याक्स डिडक्टेबल हुन्छ कि न हुदैन ? हुदैन । यदि कुनै एजेन्टले भनेको छ भने त्यो पनि सरासर गलत हो ।
२) मेडिकल ट्रिटमेन्ट खर्च पाइन्छ कि पाइदैन ? साधरणतया पाइदैन । यदि तपाइँले त्यो अप्सन भएको बिमा किन्नु भएको छ भने पाउन सकिन्छ तर शतप्रतिश हैन । त्यो हेर्न र बुझ्न जरुरी छ, कति पाउनु हुन्छ ?
३) मेडिकल रिपोर्ट बिना कतिसम्मको जीवन बिमा गर्न सकिन्छ ? साधरणतया ५० हजार डलरसम्मको मात्र । यदि कसैले मेडिकल रिपोर्ट नै चाहिदै अथवा मेडिकल सम्बन्धी आवश्यक विवरण खुलाइएको छैन वा ढाटेर बिमा गराएको छ भने भोलि समस्या हुन सक्ने कुरा जानकारहरुले बताएका छन् ।
मेडिकल हिस्ट्री लुकाउँदा परेको बेलामा अप्ठ्यारो हुन सक्ने जानकारहरुको राय थियो । उमेरमा ४० वर्ष माथिको र रकममा लाख डलरभन्दा माथिको बिमा, मेडिकल रिपोर्ट बिना ‘नो वे’ अर्थात हुनै सक्दैन पनि भनेका छन् उनीहरुले । बिमा एजेन्टको ‘इथिक्स’ हुन्छ त्यो इथिक्सभन्दा बाहिर गएर कसैले यस्तो काम गरेको हुन सक्छ तर इन्स्योरेन्सको कपी नहेरी ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताए । यससम्बन्धि तेस्रो पक्षको जानकार व्यक्ति सँग वा बिमा कम्पनी (एजेन्ट हैन)मा सिधै सम्पर्क गरेर बुझ्नु र निश्चित गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ ।
बिमा किन्नु अघि हेल्थ इस्युका बारेमा सोधिने प्रश्नहरुको नमुना कपी यहाँ राखिएको छ । सबैसँग सबैको मिल्दोजुल्दो नहुन सक्छ तर लगभग यस्तै हुन्छ । यसको पनि जाँच गर्नु राम्रो हुन्छ ।
मूल प्रश्न, इन्स्योरेन्समा हामी कहाँ–कसरी ठगिएका हुन सक्छौ ?
संसारका सबै बस्त,सबै पशुहरु र सबै मान्छेहरु खराब नभए जस्तै सबै बिमा पनि खराब हुदैनन् । बिमा व्यवसायका मान्छे पनि सबै खराब हुदैनन् तर, अमेरिकाको नेपाली समुदायमा नेपालीद्वारा नै खराब बिमाको खेती प्रशस्त गरिएका कुरा सतहमा आइसकेका छन् ।
कस्ता हुन्छन् खराब बिमा ? तपाइँको पोलेसीको वाइण्डिङ् बुक पल्टाउनुहोस् । आफ्नो इन्स्योरेन्स इण्डेक्स युनिभर्सल लाइफ हो कि हैन, पत्ता लगाउनुहोस् । आफूलाई थाह नभए कुनै जानकार व्यक्तिलाई सोध्नुहोस् । कम्पनीमा फोन गरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ, आफ्नो इस्योरेन्स कस्तो हो ।
यदि हो भने पोलसीभित्रको कुनै पेजमा ग्यारेन्टेड इलुष्ट्रेटेड रेट देखाइएको हुन्छ । हामीलाई प्राप्त इण्डेक्स युनिभर्सल लाइफको एउटा नमूना १६औं पेजमा छ भने अर्को नमूना १४औंमा छ । कम्पनी पिच्छे यसको पेज फरक हुन सक्छ तर चार्ट उस्तै हुन सक्छ ।
त्यसको पहिलो कोलममा पोसली इयर, दोस्रोमा एज, तेस्रोमा प्लाण्ड एन्युलाइज्ड प्रिमियम, चौथोमा एक्युमुलेटेड भ्यालू, पाँचौमा क्यास सरण्डर भ्यालू र छटौंमा नेट डेथ बेनिफिट हुन्छ ।
न्यूजर्सी बस्ने ४० वर्षिय एक नेपाली पुरुषलाई बेचिएको बिमाको पेज हो, यो । यसमा हेर्नुस्, उसलाई दुई लाख ५० हजार डलर डेथभ्यालू भएको बिमा बेचिएको छ । जसको प्रिमियम मासिक दुई सय डलर छ ।
माथिको तालिकाले देखाएको छ– यो बिमा लिनेले पहिलो वर्ष २ हजार ४ सय डलर तिर्छ उसको बिमाले १ हजार १ सय ४३ डलर आर्जन गर्ने देखाइएको छ, जसलाई एक्युमुलेटेड भ्यालू भनिन्छ तर उसले पाउने पैसा जसलाई क्याश सरण्डर भ्यालू भनिन्छ, यो भने जिरो छ । दोस्रो र तेस्रो वर्षसम्म पनि जिरो छ ।
धेरै एजेन्टले अहिले हतासमा चार–पाँच वर्ष पछि तपाइँको पैसा बढ्छ भन्ने जवाफ आफ्ना ग्राहकलाई दिने गरेको पाइएको छ । तर बढ्ने हैन, चौथो वर्षदेखि थोरै पैसा क्याश सरण्डर भ्यालूमा देखिन थालेको छ । जुन उसले तिरेको भन्दा धेरै कम हुन्छ । यो पोलेसी अनुसार दश वर्ष पुग्दा उसले चौबीस हजार डलर तिर्छ तर पाउने पैसा ८ हजार ३ सय ९६ डलर मात्र हुन्छ त्यसमा सरण्डर चार्ज र अनेक ‘हिडन’ चार्ज कति हुन्छ थाह हुदैन । जे होस् हात लाग्ने ज्यादै न्यून हुन सक्छ । यही हिसाबले जाँदा २० वर्षमा उसले ४८ हजार डलर खन्याउँछ, छोड्नु परे जम्मा ८ हजर ९ सय ६४ डरलमा अनेक चार्ज घटाउँदा कति पाउँछ त्यो पनि थाह हुँदैन । २६ वर्ष पुग्दा उसले ६० हजार ४ सय डलर तिर्छ तर उसले पाउने सबै जिरो, जिरो र जिरो अर्थात ल्याप्स हुन्छ । बिमा सकिन्छ । डेथ भ्यालू पनि सकिन्छ । त्यतिबेला मान्छेलाई अरु कुनै रोग लाग्नु पर्दैन । काल पर्खनु पर्दैन । हर्ट अट्याक भएर मर्न सक्छ ।
२५ वर्षसम्म डेथ अर्थात मृत्यु भएपछि पाउने रकम २ लाख ५० हजार ७ सय ६ देखिन्छ तर यदि २५ औं वर्षको अन्तिम दिनसम्ममा मृत्यु भएन भने भोलिपल्ट सबै शून्य हुन्छ । यत्रो वर्षको लगानी बालुवामा पानी सरह हुन्छ ।
यो कुरा तपाइँहरुका एजेन्टले बताएका, देखाएका र बुझाएका छन् कि छैनन् ? छैनन् भने तपाइँले कानुनी लडाइँ लड्न सक्ने कुरा यस सम्बन्धी जानकार व्यक्तिले बताएका छन् ।
यदि आफू पीडित भएका ठान्नु हुन्छ भने आफ्नो स्टेटको इन्स्योरेन्स ब्युरोमा सिधै कम्प्लेन गर्न सकिन्छ । आफ्नो स्टेट वा सिटीको बार एसोसिएसन मार्फत निशुल्क पाइने वकिलको सहयोगमा क्षतिपूर्ति भराउन सकिने व्यवस्था हुन सक्छ । . http://www.naic.org/ मा पनि कम्प्लेन लेखाउन सकिने छ । तर, यस्ता कंपनीहरु भोलि बैकरप्सीमा गएभने टेक्ने समाउने ठाउँ हुँदैन, क्षतिपूर्तिको त कुरै छोडौं ।
अहिले नेपाली समुदायमा बेचिएका बिमा एउटै कम्पनीको नभएर विभिन्न कम्पनीको नाउँमा छन् । यसको कारण के हुन सक्छ ? यो पनि खोजीको विषय हुन जरुरी छ । सम्भावनाहरू केलाउँदा भोलि गएर कुनै एक दुई कम्पनी नपल्टिएलान् भन्न सकिन्न् ।
अमेरिकको राष्ट्रपतीय चुनावमा रिपब्लिकनका तर्फबाट उमेद्वार बनेका डोनाल्ड ट्रम्पका चार कम्पनीले बैंकरप्सी गरिसेकेका छन् तर पनि उनी राजनीतिदेखि व्यवसाय गर्न अयोग्य भएका छैनन् । व्यवसायिक बैंकरप्सी सम्बन्धि यो एउटा बलियो उदाहरण हो ।
माथि देखाइएको यो बिमामा महत्वपूर्ण कुरा अर्को के पनि छ भने दुई लाखको डेथ बेनिफिटका लागि हामी ६० हजार डलरभन्दा बढी रकम लगाउँछौं र इन्स्योरेन्स कम्पनीको तालिका अनुसार मृत्यु भएन भने सारा गुमाउँछौं । अर्थात यो इन्स्योरेन्सको पैसा पाउन उसको तालिक अनुसार इन्स्योरेन्स किन्ने मान्छे मर्नु पर्ने हुन्छ ।
यही रकम बराबरको इन्स्योरेन्स बजारमा धेरै सस्तोमा पाइने कुरा जानकारहरु बताउँछन् ।
यो भन्दा खराब इन्स्योरेन्स बोस्टन क्षेत्रमा बेचिएको कपी पनि हामीले प्राप्त गरेका छौं । जसको २० वर्षपछि नै क्यास शरण्डर भ्यालू र डेथ बेनिफिट समाप्त हुन्छ । त्यो २० वर्षसम्म डेथ बेनिफिट पनि वढ्दैन । वर्षको चार हजार डलरका दरले ८० हजार डरल खन्याइसके पछि सबै शून्य हुन्छ ।
मानांै एउटा २० वर्षको मान्छेले यो बिमा लियो । ४० वर्ष पुग्दा उसले ८० हजार डलर खर्च गर्छ त्यसपछि सबै लगानी शून्य हुन्छ भने त्यातिबेला त्यो मान्छे माथि के बित्तो हो ? हेर्नुस् तालिका आफैं बोल्छ । जानकारहरुले बताएका कुरा नै हामीले यहाँ राखेका हौं ।
यो बिमामा तपाइले लगानी गरेको रकम ५० प्रतिशतले बृद्धि हुने भनिए पनि जुनसुकै कागज देखाए पनि अन्ततः तपाइले पाउने माथिको ग्यारेन्टेड इलुस्ट्रेटेड रेट (नमूना २ र ३) अनुसार हो भन्ने कुरा हामीलाई उनै जानकारहरुले बताए । जुन कुरा बिमाको कागजले पनि स्पष्ट पार्छ ।
यसको खण्डन यहाँ देखाइएको यो तलको नमूना चार पेजले गर्न सक्ने तर्क पनि बिमा बिक्रेताको हुन सक्छ, जसलाई करेन्ट इलुस्टे«टेड रेट भनिएको छ । यसमा पनि तपाइको इन्भेष्टमेन्टको तुलनामा रिटर्न घट्छ र अन्त्यमा शून्य अर्थात ल्याप्स नै हुन्छ । यसमा बुझ्नु पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यो ‘एजुम्प्सन’ अर्थात अनुमान वा कल्पना मात्रै हो । यो पेजको पुछारमा भनिएको छ–यहाँ देखाइएको बेनिफिट्स् र भ्यालुहरुको ग्यारेन्टी छैन । यहाँ देखाइएका सबै कुरालाई बिमाकर्ता कम्पनीले जुनसुकै समय परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि राखेको हुन्छ भन्ने आशय पेजको पुछारमा फूटनोटले जनाउँछ । अघिल्लो पेजको ग्यारेन्टेड भ्यालू अनुसार नै हुन्छ भन्ने कुरा यसको अन्त्यमा पनि लेखिएको छ । यो पेजको फूटनोटमा लेखिएको कुरा तपाइहरुलाई बिमा बिक्रेता एजेन्ट नबताएको भए त्यसलाई सिधा बेइमानी भन्न सकिन्छ । यो पेजको फूटनोटका बारेमा अंग्रेजी भाषामा राम्रो दलख भएको मान्छेबाट पनि बुझ्न जरुरी छ, के भनिएको छ यसमा ?
यहाँ देखाइएका कुरा सत्य होइनन् भने यसलाई खण्डन गर्न सक्नु पर्छ । हुन् र यदि कसैले यस्ता इन्स्योरेन्स कसैलाई बेचेको छ भने थप झूठो बोलेर व्यक्तिलाई थप क्षति पुर्याउनु भन्दा इन्स्योरेन्स रद्द गर्ने सुझाव आफ्ना ग्राहकलाई दिनु बुद्धिमता हुन्छ । थोरै भए पनि इमान्दारिता देखिन सक्छ । ग्राहकले माफ गर्न सक्छन् ।
सबै कुरा नियतवश हुदैनन् । कहिलेकाँही विषयगत ज्ञानको अभावले अन्जानवश पनि हुन सक्छन् । अन्जानवश नै भएको छ भने आफूलाई सच्याउने ठाउँ सधैं बाँकी रहन्छ । कुनै पनि विषय सामाजिक सञ्जाल र संचार माध्यममा आइसकेपछि त्यसमा आफूले गल्ती गरेको भए स्वीकार्नु पहिलो बुद्धिमानी हुन्छ । नभए सामाजिक रुपले सामना गर्ने साहस र गुण कुनै पनि प्रोफेशनल मान्छेमा हुनु पर्छ ।
यदि कुनै पनि व्यक्ति साच्चिकै प्रोफेशन हो भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमा आएका कुरालाई शेयर गरेमा, लाइक गरेमा, प्रतिकृया दिएमा जो सुकैलाई अदालतमा लाने, कारबाही गर्ने जस्ता निम्न स्तरका कुरा गरेर हिड्दैन । यदि कसैले गरेर हिड्छ भने यसैबाट थाह हुन्छ त्यो व्यक्ति कुन स्तरको हो ? यस्ता हर्कत गर्नुभन्दा बिमाका बारेमा विवादित यी कुराहरुलाई प्रस्ट्याउनु व्यवसायीक धर्म हुन आउँछ ।
ढाटेर बेच्नु र सत्यता सतहमा आएपछि फेरि पनि ढाट्नु भनेको हत्केलाले सूर्य छेके भन्ठानु सरह हो । हत्केलाले सूर्य छेक्न सकिन्छ तर आफनो अनुहार मात्र छेकिन्छ । आफ्नो अनुहार छेकियो भनेर संसारलाई छेकेको भ्रममा नपर्नु ।
अमेरिका ठूलो छ । वास्तवमै यो ल्याण्ड अफ अपरच्युनिटी हो । धेरै अवसरहरु छन् । पैसा कमाउने अरु पनि सयौं असल बाटा होलान् । यस्ता इस्योरेन्स बेचेर मान्छेको दुःखको कमाई बालुवामा पानी बनाउनु भनेको शतप्रतिशत ठगी हुनसक्छ । गरेको भए आजैदेखि रोक्नु सबैका लागि श्रेयकर पनि हुन्छ । - साभार : १२ खरी
see this link too.
आइतबार १६, फागुन २०७२
See these links too
फेसबुकमा यस्तो पनि देखियो !
In Youtube.com .......
इन्स्योरेन्समा आफूलाई मिसरिप्रिजेन्ट गरिएको, ठगिएको महशुस गर्ने कुनै पनि भर्जिनियाका ग्राहकले यो https://www.scc.virginia.gov/boi/complaint.aspx लिँकमा गएर अनलाइन Complain पठाउन सक्नुहुन्छ । दोशी उपर तुरुन्त छानबिन र कार्वाही शुरु हुने जानकारी प्राप्त भएकोले यहाँ शेयर गरिएको छ । यसै गरी हरेक स्टेटमा यस्तो इन्स्योरेन्स बोर्ड हुन्छ गुगल सर्च गरेर सजिलै फेला पार्न सक्नुहुन्छ । https://www.scc.virginia.gov/boi/complaint.aspx
जनचेतना अभियान शुरु गरिए पछी अनिल खनाल र नेपाल मदर सँग फोन गरेर, भेटेर, मेसेज पठाएर हामीलाई त बर्बाद पारे हजुर के गर्ने होला ? भन्दै प्रश्न गर्ने पीडितहरु को सँख्या दुई सय भन्दा बढी नाघेको छ । नेपाल मदर डट कम र ब्यक्तिगत रुपमा म इन्स्योरेन्सको धेरै जानकारी राख्दैनौँ तर हाम्रा श्रोत ब्यक्ती इन्स्योरेन्स बिशेषज्ञ अनिल खनालले यि टिप्सहरु दिनुभएको तपाईंका लागि ।
१ - जो जस सँग, जुन कम्पनी सँग, एजेन्टसँग तपाईंहरुले इन्स्योरेन्स लिनुभएको छ सबै भन्दा पहिला तिनलाई कल गर्नुस बोलाउनुस, तपाईंलाई दिइएको जुन इन्स्योरेन्स बाइन्डर छ त्यसको शुरु देखी अन्त्य सम्मका सबै कुरा बुझाउन भन्नोस । उसलाई सोध्नुस् मैले अहिले सम्म कती पैसा तिरेँ ? मेरो एकाउन्टमा कती पैसा जम्मा भएको छ ? यदी मैले आज सरेन्डर गरेँ भने मैले कती फिर्ता पाउँछु ?? एक्कुमुलेट भ्यालु होइन क्यास भ्यालु कती मेरो हात मा पर्छ सोध्नुस् ।
यो भन्न नभुल्नुस् - मलाई अनुमानित डाटा होइन ग्यारेन्टी पार्ट मात्र देखाउ । लङ टर्म, सर्ट टर्म दुबै । भोली कम्पनी फाईदामा गए हामीले यती दिन्छौँ भन्ने छन त्यो कुरा होइन मैले ग्यारेन्टी कती पाउँछु यो सोध्नुस् । आज पाउने अथवा बिस देखी पच्चिस बर्ष पछी पाउने ग्यारेन्टी भ्यालु कती हो ?? अनी मैले सरेन्डर गर्दा बिभिन्न नाममा कती फि र शुल्क काटिन्छ ? त्यो पनि सोध्नुस् । बर्सेनी मेरो उमेर बढ्दै जाँदा मेरो कस्ट अफ इन्स्योरेन्स कुन दरले बढ्दै जान्छ ?? सोध्नुस् । लिखित रुपमा माग्नुस ।
२- यस बिषयमा आफूलाई लागेका हरेक कुरा सोध्नुस् एजेन्ट सँग, उनिहरुले तपाईंलाई जबाफ दिनै पर्छ ।
३ - त्यस पछी सम्बन्धित कम्पनीमा फोन गर्नुस् र सोध्नुस् तिनै कुरा । यदी एजेन्टले तपाईंलाई मिस रिप्रिजेन्ट गरेको रहेछ भने पनि सम्बन्धित कम्पनीले तपाईंलाई वास्तविक कुरा बताउन कर लाग्छ । इन्स्योरेन्सको बिज्ञ कसै सँग पनि प्रोडक्ट को बारेमा, यसका बिबिध पक्षको बारेमा सोध्नुस्, अहिले त गुगल गरेर पनि धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ हेर्नुस् ।
४- अनी आफूलाई उचित लाग्छ रहनुस, लाग्दैन भने उचित निर्णय लिनुस् ।
" नेपाली र भुटानी मुलका नेपाली समुदायलाई इन्स्योरेन्सबाट हुने ठगीबाट सचेत गराउने अभियान भाग - ४ "
हाम्रो यो अभियान इन्स्योरेन्स ठगी हुन नदिने र भैरहेको ठगीलाई रोक्ने मात्र हो । हाम्रो कोही कसै सँग कुनै रिस द्वेस छैन र हुने पनि छैन । हाम्रो यो जनचेतना जगाउने अभियान कुनै ब्यक्ती वा कम्पनिका बिरुद्ध वा समर्थनमा लक्षित छैन । तर ठगी गर्ने, मिस रिप्रिजेन्ट गर्नेका बिरुद्ध अबस्य छ । सभ्य ढंगले प्रतिकृया लेखौँ । बदम्नाशी गर्ने लाई अगाडि ल्याउँ तर अनुशासन मर्यादा सभ्यता लाई ख्याल गर्न अनुरोध छ । राम्रा इन्स्योरेन्स कम्पनी र त्यहा कार्यरत परिपक्व, राम्रा इन्स्योरेन्स एजेन्टहरु प्रती हाम्रो सधैं सम्मान छ । उनिहरुमा कुनै भ्रम नपरोस । हाम्रो निशाना ठगी गर्ने तिर मात्र हो ।
तपाईंलाई लागेका कुरा अनुभब पनि शेयर गर्दै गर्नुहोला ।
* इन्स्योरेन्स बिशेषज्ञ अनिल खनाल सँग तपाईंलाई लागेका कुरा, जिज्ञासा वा प्रश्न भए वहाँ सँग सोध्न सक्नुहुन्छ वहाँको फोन नम्बर हो - 703-789-2307, Face Book मा अनिल खनाल https://www.facebook.com/anil.khanal2010
, Email - anil.khanal@yahoo.com ,
visit www.nepalmother.com too.
ठगिएका, भ्रमित, पीडित ग्राहक सँग, अर्थात frustrated Client सँग कुनै पनि कम्पनी, पार्टी, बिजनेस हाउस, इन्स्योरेन्स कम्पनी, दलाल, वा दलाल कम्पनीले माफी माग्छन, भुल सुधार गर्छन्, अगाडिको बाटो क्लियर गर्छन्, ग्राहक सन्तुस्ट पार्छन अमेरिकामा । तर आश्यर्यको कुरा यहाँ त ठगी गर्ने, ग्राहकलाई मिसरेप्रिजेन्ट गर्ने दलालहरु ग्राहकलाई उल्टै अदालत लैजाने र मुद्दा मामिलाको झँझटमा फसाउने भन्दै अरु ग्राहकलाई थम्थम्याउने प्रयास पो गर्दारहेछन बा ! यिनको कुबुद्धी ! यिनलाई के थाहा अदालत जाँदा मिस रेप्रिजेन्ट गरिएका ग्राहक लाइन लागेर बयान दिन गए भने के हुन्छ ?? उनिहरुको कम्प्लाएन्स हेर्ने board मा गए के हुन्छ ?? ठगी खाने बुद्धीले राम्रो र भबिस्यको कुरा कसरी आँकलन गर्न सकोस र ! बिचराहरु ! बुझ्दै नबुझी चिउ चिउ गर्ने सहयोगी एजेन्टहरु ले पनि भबिस्य सोँचुन, परिवार सोँचुन । हेर्दै जाउँ अब कतिको बिल्ली बाँठ हुने हो !!! भिरमा जाने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ तर काँध थाप्न सकिन्न क्यारे होइन र ??
जनचेतना अभियान शुरु गरिए पछी अनिल खनाल र नेपाल मदर सँग फोन गरेर, भेटेर, मेसेज पठाएर हामीलाई त बर्बाद पारे हजुर के गर्ने होला ? भन्दै प्रश्न गर्ने पीडितहरु को सँख्या दुई सय भन्दा बढी नाघेको छ ।
नेपाल मदर डट कम र ब्यक्तिगत रुपमा म इन्स्योरेन्सको धेरै जानकारी राख्दैनौँ तर हाम्रा श्रोत ब्यक्ती इन्स्योरेन्स बिशेषज्ञ अनिल खनालले यि टिप्सहरु दिनुभएको तपाईंका लागि ।
" नेपाली र भुटानी मुलका नेपाली समुदायलाई इन्स्योरेन्सबाट हुने ठगीबाट सचेत गराउने अभियान भाग - ३" (visit www.Nepalmother.com too)
सोझा साझा, अङ्रेजी भाषामा दख्खल नभएका, सानो तिनो काम गेरेर अमेरिकामा जिबिको पार्जन गर्ने देखी हर तह तप्कामा रहेका सम्म नेपालीहरु र भुटानी मुलका नेपालीहरुलाई इन्स्योरेन्सका नाममा सपना बाँडेर नबुझाईकन यहाँ साइन गर्नुस भन्दै साइन गराउँदै, १३ देखी २२ प्रतिशत सम्म हरेक बर्ष लाभाँश दिन्छौँ भन्दै झुठो सपना बाँड्ने र इन्स्योरेन्स बेच्ने एउटा ब्रोकर कम्पनीमा कार्यरत ७० देखी १२० प्रतिशत सम्म कमिशन खाएर ग्राहकको आर्थिक शोसण गरिरहेका केही नेपाली एजेन्टहरुको हिजो राती कल कन्फेरेन्स मिटिङ भएछ । कल कन्फेरेन्स मिटिङको विवरण रेकर्ड सुनियो जहाँ अनिल खनाल र रामप्रसाद खनालले गरेको कुराकानीले आफ्नो ब्यवसाय चौपट भएको र अब समाजमा मुख देखाउन, पोलिसी बेच्न गार्हो हुने भयो, बर्बाद भइयो । जे जे हुन्छ हुन्छ एउटा लयर हायर गरेर अदालतमा उनिहरु बिरुद्ध मानहानी को ल सुट गरौ, यसो गरे हाम्रा ग्राहकलाई हामीले ल सुट गरेका छौं भन्दै देखाउन सिजिलो हुन्छ होइन भने त अब हामी फेरी घन्टे जागिर तिर फर्किनु पर्ने हुन्छ भन्दै रुवाबास गरेछन केही अपरिपक्व एजेन्टहरुले । अर्को एउटा अपरिपक्व एजेन्टले भिडियोलाई नेपाली बाट अङ्रेजीमा उल्था गर्ने र कम्पनीमा पठाउने जिम्मा लिएछन र हिँजो राती देखी अहिले सम्म त्यही काम मा खाना समेत बिर्सेंर लागिरहेको थाहा पाइयो ।
यसै बिचमा केही थप अपडेट गर्न मन लाग्यो ।
१ - एक जना इन्स्योरेन्स सम्बन्धी लयरका अनुसार ग्राहकलाई नबुझाई र गलत जानकारी दिँदै साइन गराउँने मिस रेप्रेजेन्ट गर्ने त्यस्ता एजेन्ट लाई अमेरिकी कानून अनुसार एक लाख डलर जरिवाना, लाइसेन्स खारेज र पाँच बर्ष सम्मको जेल सजायँ वा दुबै सजाय हुन सक्छ ।
२ - लयरका अनुसार ग्राहकलाई इन्स्योरेन्स पोलिसी मा हस्ताक्षर गराउनु पूर्व ग्राहकलाई त्यसका सबै पक्षहरु पूर्ण जानकारी दिनु पर्छ । यदी गलत र नहुने कुरा को सपना बाँडेर हस्ताक्षर गराएको भनी केही त्यस्ता ठगिएका ग्राहकले अदालतमा साबिती बयान दिएमा अदालतले कन्जुमर राइट अनुसार कन्जुमर कै पक्षमा फैसला गरेका हजारौं नजिर हरु छन ।
३ - आफु ठगिएको महशुस गर्ने हरेकलाई ठगिएको छु भन्ने अधिकार हुन्छ अमेरिकामा । अमेरिकी संबिधानले यहाँ आफूलाई लागेका कुरा बोल्न पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ ।
४ - प्रेस स्वतन्त्रता भएको देश हो अमेरिका । यहाँ कुनै पत्र पत्रिका मिडियालाई कुनै पनि इस्यु मा छलफल गर्न, बोल्न, कुराकानी गर्न, अन्तर्वार्ता गर्न स्वतन्त्रता छ ।
५- हामी सँग ठगिएका ग्राहक एक होइन सय भन्दा बढी प्रमाण साहित संपर्कमा आइसकेकेका छन नेपाली र भुटानी समुदायका । ल सुट एजेन्टहरुले गरिदिए हामीलाई झन क्या बात भन्दै ति भुक्त भोगी को लर्को लिएर अदालत जान र ति ठगहरुलाई त्यही अदालत बाटै सिधै जेल तिर लैजाँदै गरेको द्रिस्य हेर्न मन छ र यस पछी कुनै ठगले अमेरिकामा बसेर ठगी गर्न हिम्मत नगर्ने परिस्थिती हेर्न मन छ ।
६ - ति रुवाबासी गर्ने र अनिल खनाल र राम प्रसाद खनालले शुरु गरेको जन चेतना अभियान ले आजित अपरिपक्व एजेन्टहरुलाई अझ अर्को चुनौती दिन मन लाग्यो - तिम्रा मुख्य एजेन्टलाई सोध । शुरुमा हामीले नै इन्स्योरेन्स पोलिसी किनेका थियौँ उनी सँग, पछी जब जब पोलिसिका बारेमा प्रश्न गर्न थालियो, तिमीहरुका मुख्य एजेन्ट किन भागी रहे ?? फोन गर्दा ईमेल गर्दा जबाफ नदिने, टेक्स गर्दा जबाफ नदिने, भ्वाइस मेल गर्दा जबाफ नफर्काउने, भेट भयो भने भागी हाल्ने किन गरेका तिनिहरुले ?? एक बर्ष भन्दा बढी कती पर्खिने जबाफका लागि ?? प्रमाण छन हेर्न आउ । हिम्मत छ ?? एजेन्टले ग्राहक बनाए पछी ग्राहक सँग भाग्ने किन ?? जबाफ दिन किन अलमल ?? जबाफ फर्काउन, इन्स्योरेन्सको बारे व्याख्या गर्न किन असमर्थ भएका ?? कृपया एक पटक यो प्रश्न सोधी हेरत उनै मुख्य एजेन्ट सँग होकी होइन भनेर !
७ - कृपया तर्साउने दुस्साहस नगर बरु नियम कानून फेस गर्न तिमीहरु तयार होउ । हामी नियम कानून फेस गर्न तयार भएरै जन चेतनाको अभियान मा सामेल भएका हौँ । एक सय भन्दा बढी ग्राहक र तिमीहरुले झुक्काएर एजेन्ट बनाएका पीडितहरु समेत तिमीहरुलाई सबक सिकाउन सप्रमाण पूर्ण तयार छौं । चेतना भया ।
८ - हाम्रो यो अभियान इन्स्योरेन्स ठगी हुन नदिने र भैरहेको ठगीलाई रोक्ने मात्र हो । हाम्रो कोही कसै सँग कुनै रिस द्वेस छैन र हुने पनि छैन तर गलत काम गर्ने लाई सारा समुदायका अगाडि नाँगेझार नपारी यो अभियान रोकीने छैन । सभ्य ढंगले प्रतिकृया लेखौँ । बदम्नाशी गर्ने लाई अगाडि ल्याउँ तर अनुशासन मर्यादा सभ्यता लाई ख्याल गर्न अनुरोध छ । राम्रा इन्स्योरेन्स कम्पनी र त्यहा कार्यरत परिपक्व, राम्रा इन्स्योरेन्स एजेन्टहरु प्रती हाम्रो सधैं सम्मान छ । उनिहरुमा कुनै भ्रम नपरोस । हाम्रो निशाना ठगी गर्ने तिर मात्र हो ।
९ - नेपाली र भुटानी मुलका नेपाली बाहेक यि एजेन्टहरुले कुनै एक जना अमेरिकन लाई उनिहरुको इन्योरेन्स बेच्न किन नसकेका ?? जबाफ छ ?
१० - अझै पनि हामी सँयमता अपनाएर त्यस्ता एजेन्टहरुको नाम र प्रमाण पुरै सार्वजनिक गरिसकेका छैनौँ । उनिहरु परिवर्तन होउन, आफ्नो कमिशन मात्र नहेरुन । नराम्रो प्रोडक्ट र सम्पना मात्र नबेचुन । ग्राहकको हितलाई पनि ख्याल गरुन, सच्चिउन । हामी लाई त ठगे ठगे अरुलाई नठगुन भनेर धैर्यताको सीमा कायम राखेका छौं । हेर्दैछौं हरकत । अब स प्रमाण विवरण एजेन्टहरुको नाली बेली प्रकाशन र कानुनी उपचार तिर पनि अबस्य पछी परिने छैन । आगे उनिहरुकै जो मर्जी ।
यहाँ बाट शुरु भएको थियो हाम्रो जन चेतना जगाउने अभियान !
* इन्स्योरेन्स बिशेषज्ञ अनिल खनाल भन्नुहुन्छ - "अमेरिकामा इन्स्योरेन्सका नाममा यसरी ठगिन्छन नेपाली, नेपाली एजेन्टबाटै ! लाइफ इन्स्योरेन्स एजेन्टहरूले 100 प्रतिशत सम्म कमिशन खाएर घटिया इन्स्योरेन्स भिडाउछन् !"
* नेपाली समुदायलाई ठगीन बाट सचेत गराउने अभियान भाग - १, हाम्रो यो अभियान क्रमश जारी रहनेछ । तपाईंलाई लागेका कुरा अनुभब पनि शेयर गर्दै गर्नुहोला ।
हिजो साँझ इन्स्योरेन्सको बिषयमा हामीले इन्स्योरेन्स बिशेषज्ञ अनिल खनाल जी सँग गरेको कुराकानी पछी हजारौँले यो कुराकानी हेरेर, लाइक गरेर, कम्मेन्ट गरेर, शेयर गरेर इन्स्योरेन्सको बारेमा समाजमा नयाँ तरँग उत्पन्न गराइदिनु भएको छ । हाम्रो उद्देस्य पनि के हो भने नराम्रो प्रोडक्टमा कोही नफसुन, नठगीउन, एजेन्टले पनि आफ्नो स्वार्थ र कमिशन मात्र नहेरेर Client लाई पनि फाईदा पुग्ने काम गरुन भन्ने मात्र हो । समाजमा बस्ने हरेकलाई फाईदा पुगोस भनेर यो अभियान शुरु गरिएको हो । कसै सँग रिस द्वेस भएर वा कसैलाई बिगार्न वा कसैलाई सपार्न यो अभियान शुरु गरिएको होइन । कुनै कम्पनीको बिरोध वा कुनै कम्पनीको समर्थन पनि हाम्रो लक्ष हुँदै होइन । चेतना आओस । हरेक Client ले हेरेर बुझेर इन्स्योरेन्स लिउन, नराम्रो प्रोडक्ट मा नफसुन, एजेन्ट पनि जिम्मेवार बनुन हाम्रो भन्नु मात्र त्यत्ती हो ।
अनिल खनाल जी को भनाइ सँग कसैको असहमती छ भने वहाँ सँग आफै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ । हामीले अनिलजी सँग कुरा गरेर वहाँ को भनाइ राखेका हौँ । त्यसैले हामीले वहाँको फोन ईमेल सबै इन्फर्मेशन दिएका छौं माथि नै । तर हजारौंं ले यो कुरा मन पराए पनि ७ -८ जना एजेन्ट मित्रहरुलाई पटक्कै मन परेनछ । वहाँहरुले अनिल खनाल जी को भनाइ गलत भनेर भन्दै हुनुहुन्छ । केहीले त मज्जाले गाली गर्न समेत भ्याउनुभएछ वहाँ हरुलाई बिशेष धन्यवाद । नभुल्नुहोला म आफै पनि यस बाट ठगीइसकेको भुक्तभोगी हुँं । सभ्य भाषामा हामीले यो अभियान जारी राख्ने छौं जनचेतना जगाउन । 99.9 प्रतिशतले सहि भनेर हामीलाई फिडब्याक दिइरहनु भएको छ । सबैलाई आ आफ्नो तर्क र बिस्लेशणका लागि धन्यवाद ।
१२ घण्टा भित्र, मलाई जबरजस्ती एजेन्ट बनाइयो, मेरो फोटो दुरुपयोग गरिएको छ म पनि मेरा कुरा राख्छु भन्दै आफु पनि पीडित भएको बताउने देखी मलाई बर्षको 13% आम्दानी हुन्छ भन्दै झुक्काएर साइन गराए म पनि ठगिएँ के गर्ने होला ? भन्दै गुहार खोज्ने हरुको आवाज पनि आइसकेको छ, हामी बिस्तारै ति आवाज पनि सार्वजनिक गर्ने छौं आबस्यक परेमा ! प्रतिक्षा गर्नुस ।
गाली गलौज र असभ्य भाषा प्रयोग गर्ने दुई जना 120% कमिशन खाने वाला एजेन्टको भनाइ डिलिट गरिएको छ । सभ्य भाषामा अाफ्ना भनाइ राख्ने हरेकलाई स्वागत गरिएको छ । आउनुस स्वस्थ बहस गरौँ । यथार्थ कुरा जनमानसमा पुर्याउँ, यो पनि धर्म हो । महायज्ञ हो मलाई त्यस्तो लाग्छ ।
सहि एजेन्ट, सहि इन्स्योरेन्स र राम्रा प्रोडक्ट बेच्ने हरेकलाई स्वागत छ आउनुस गलत के हो सहि के हो तपाईंले छातीमा हात राखेर आफुले जानेको कुरा बताइदिनुस हामी Client हरुलाई । हामी धन्य हुने छौं ।
हामी नेपाल बाट अमेरिका आएका छौं । यहाँ काम गरेर खान पाईन्छ रोजगारीको कुनै समस्या छैन । कृपया कोही पनि गलत बाटो मा नजाउँ । ५ बर्ष पछी , १० बर्ष पछी बाटोमा भेट्दा हाँसेर राम्रो सँग बोल्न पाइयोस । हार्दिकता होस । त्यस्तो व्यबहार गर्न पाइयोस नकी फलानाले मलाई डुबाएको हो भनेर Client हिंड्ने, एजेन्ट टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने दिन नआवोस । सबैलाई चेतना भया ।
जो जो साथीहरु एजेन्ट बनेर त्यस्ता आफूलाई कमिशन धेरै आउने तर Client मर्ने प्रोडक्ट बेच्नुहुन्छ, त्यस्ता कम्पनिमा काम गर्नुहुन्छ । जानेर वा नजानेर त्यो पाप गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता मित्रहरु कृपया मेरो वाल र स्टाटस फोहोर पार्न नआउनुहोला बिन्ती छ । यस भन्दा माथि त्यस्ता प्रोडक्ट बेच्ने केही एजेन्ट मित्र हरु चोर भन्नु भन्दा पहिला चोरले खुट्टा ताने झै खुट्टा तान्दै हुनुहुन्छ । साबधान ! पर्दा खुल्दै छ । पर्खनोस केही समय ।
सबै इन्स्योरेन्स गलत हुँदैनन र सबै एजेन्ट पनि गलत हुँदैनन । सहि एजेन्ट सहि इन्स्योरेन्स र राम्रा प्रोडक्ट बेच्ने हरेकलाई स्वागत छ । काम गरेर खानु पर्छ, खान पाउनुपर्छ, तर ठगी गर्न कदापी पाइँदैन । मैले भनिसकेको छु म आफै ठगिएको छु प्रमाण छ । मलाई इन्स्योरेन्स बेच्ने एजेन्ट एक बर्ष सम्म फोन, ईमेल, टेक्स र भोइस मेल मा जबाफ दिन असमर्थ किन भएको हो ?? सबै कुरा एकै चोटि किन खोलौँ भनेर मात्र सँयमता अपनाएको हुँँ बिस्तारै खुल्दै जाने नै छ ।
पर्दे मे रहेने दो पर्दा न उठाओ
पर्दा जो उठ्गयातो फिर खुल जायगा .....
भन्ने गीत ति आफ्नो मात्र कमिशन हेर्ने र Client मर्ने प्रोडक्ट बेच्ने साथीहरु याद दिलाउन चाहन्छु । हिम्मत छ भने म सँग आउनोस प्रमाण हेर्न । एजेन्ट को कर्म के हो ?? धर्म केहो ?? केबल आफ्नो कमिशन मात्र हेर्ने हो ?? Client को पक्ष बाट हेर्न पनि म चुनौती दिन्छु किन कि म Client हुँँ ।
मलाई थाहा छ आफूलाई कमिशन धेरै आउने तर Client मर्ने प्रोडक्ट बेच्ने मित्र हरु यो भिडियो हेरेर म सँग अनिल जी सँग आगो हुनुहुने छ । हामी माथि खनिनुहुने छ । तर केही समय भित्रै वहाँ हरुले मनन गर्नुहुने छ । केही २०-२२ बर्से केही नबुझी त्यता लागेका ठिटा ठिटी देखी परिपक्व भएका सम्मले पनि एक दिन पक्कै यो रियलाइज गर्नुहुने छ । यती कुरा म दाबिका साथ भन्छु । सत्य कुरा तितो हुन्छ ।
कृपया सबै सँग एउटा अनुरोध : यो कसैका बिपक्षमा वा कसैका पक्षमा चलाईएको बहस वा कसैलाई बिगार्न वा कसैलाई सपार्न गरिएको पहल पनि होइन । यथार्थ कुरा राखेर आँखा खुलाउन गरिएको एउटा सत्प्रयास हो । मनन गर्ने सबैलाई यसले लाभ दिने छ । अती भए पछी पर्दा खुलाउन थालिएको मात्र हो सम्बन्धितहरुले बुझुन ।
Posted by www.Nepalmother.com at 4:26 PM